Mogadishu Journal » Shirka dib-u-hishiisiinta gobollada Jubbooyinka oo lagu wado in maanta galinka danbe uu ka furmo magaalada Muqdisho
Mjournal : — Waxaa lagu wadaa in maanta galinka danbe uu ka furmo magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya shirweynaha dib-u-hishiisiinta gobollada Jubbooyinka, oo dhowr jeer oo hore dib u dhac ku yimid kadib markii uu mad-madow shirka ku aadan soo kala dhax-gallay dowladda federaalka iyo maamulka Jubba.
Furitaanka shirweynaha waxaa la filayaa in ay ka soo qeyb-gallaan ergooyin ka kala imanaya beesha calaam-ka, kuwaa oo goob joog ka noqon doona habsami u socodka shirka.
Waxaa la filayaa in saacadaha soo socda magaalada Kismaayo ka soo qaadaan diyaarado gaar ah oo loo diyaariyay ergooyinkii gobollada Jubbooyinka uga qeyb-galli lahaa shirka ka furmaya magaalada caasimada ah ee Muqdisho.
“Qodobbada shirkan wax yaabaha diirada lagu saari doono waxaa ka mid ah horumarinta iyo nabadeynta gobollada Jubbooyinka,” ayuu yiri Inj. C/raxmaan Yariisow oo ah afhayeenka madaxweynaha Soomaaliya.
Waxaa uu afhayeenka dowladda intaa ku darray in shirkan uu aas-aas ama saldhig wanaagsan u noqon doono soo afjaradi khilaafkii in ka badan 20 sano ka taagnaa deegaannada Jubbooyinka iyo Gedo.
Shirkan oo dhowr jeer dib u dhacay ayaa wuxuu kusoo beegmayaa xilligan kaddib markii uu madaxweynuhu tagay magaalada Kismaayo, halkaasoo uu kula soo kulmay hoggaamiyaha maamulka Jubba, Sheekh Axmed Madoobe oo horay u diidanaa ka qaybgalka shirkan.
Bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay ayaa lagu waday inuu shirkan furmo, balse mad-madow soo dhexgalay dowladda iyo maamulka Jubba ayaa dib u dhaca ku keenay, taasoo uu madaxweynuhu sheegay in xal waara laga gaaray.
Shirkan ayaa wuxuu noqonayaa kii ugu horreeyay oo loo qabto shacabka ku nool Jubbooyinka, iyadoo laga doonayo ergooyinka inay ka hadlaan sidii ay uga qaybqaadan lahaayeen horumarka iyo nabadeynta gobolladooda.
Madaxweyne Xassan Sheekh’’ nidaamka federaalka waa wax dastuurka ku qoran oo aan la qaloocin karin